Mogadishu Journal » 2019 » May » 7
Mjournal :-Maamulka Puntland ayaa qaadacday guddi ay magacawday Wasaaradda Owqaafta iyo Arrimaha Diinta Xukuumadda Soomaaliya, kuwaasoo Tartan u qabanaya Shirkadaha Diyaaradaha ee qaada Xujeyda Soomaalida ee sanadkan xajineysa. Wasiirka Caddaalada iyo arrimaha Diinta Puntland...
To celebrate World Press Freedom Day and the ‘Global Conference for Media Freedom’ (#DefendMediaFreedom), to be hosted by the governments of the United Kingdom and Canada in July 2019, the British Embassy Mogadishu is delighted to announce the launch of Young Somali...
A section of North Eastern leaders have thrown their weight behind the presidential ambitions of Deputy President William Ruto. Speaking in Wajir County over the weekend during a fundraiser for Islamic institutions and anti-radicalisation programs, the leaders led by Majority...
South Africa has signed a deal to explore for oil in South Sudan, as part of a potential $1bn investment that the petroleum minister in the war-torn east African country hopes will eventually help to boost production. The two governments on Monday signed a 6 year exploration and...
Madaxweynaha Soomaaliland oo Hargeysa ku qaabilay wafdi ka socda Dowladda Masar
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabiley wasiir ku xigeenka arrimaha dibeda dalka Masar, Mr. Xamdi Sanad Luza oo booqasho ku tegau Somaliland. Waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay adkaynta xiriirka Somaliland iyo dalka...
Shil dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay duleedka Berbera
Mjournal :-Shilkan oo ahaa mid gaari,isla markaana uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa uu ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanada lafaruug iyo Xamaas oo ah duleedka Magalada Barbera gaar ahaan deegaan lagu Magacaabo miridha. Shilka ayaa yimid kadib markii...
Imaam Soomaali ah oo lagala noqday dhalashada Marekanka oo Hargaysa ka deggey
Mjournal :-Dowladda Marekanka ayaa dhalashadii kala noqotay oday Soomaaliyeed oo imaam ka ahaa masjid ku yaalla magaalada Portland ee gobolka Oregon ee dalka Marekanka,isagoo gaaray toddobaadkii hore Soomaaliland. Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye ,ayaa horay ugu jirey liiska...
Wararkii u dambeeyey ee shirka magaalada Garoowe
Mjournal :-Waxaa Maalintii Saddexaad Magalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal ka socda shirka wada-tashiga ee Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad goboleedyada. Shirkaan oo ahaa kii ugu xasaasinaa ee madaxdaan dhexmara ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin,...
Mareykanka oo ka hadlay duqeyn uu ka fuliyay Sh Hoose
Mjournal :-War qoraal ah oo kasoo baxay Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaarada Afrika ee loo yaqaano (Africom) ayaa lagu faah faahiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in...
Mjournal :-Wararka laga helayo Magalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal ayaa waxa ay sheegayaan in xalay Maamulka Puntland uu joojiyey kulan uu Magaladaas uga qeyb geli lahaa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka oo ay soo qaban qaabisay xarunta...